Apple inotora 44% yeanoshandiswa emidziyo mitsva muUnited States | IPhone nhau
Apple inotora 44% yekushandisirwa kwemidziyo mitsva muUnited States
Mazororo eKisimusi inguva yegore umo huwandu hukuru hwemakambani hunobuda mutsvuku, kunyanya iwo tekinoroji kubvira zvigadzirwa zvemagetsi zvinogara zviri chipo chakanakira chero munhu. Gore rino rave risiri gore rakanaka reApple maererano nekutengesa kwechigadzirwa chayo, iyo iPhone, inomiririra inopfuura hafu yemari yekambani gore rese. Sekureva kweFurry data, ino Kisimusi kunyangwe iri iyo kambani yakawana mashandisirwo ezvigadzirwa, rimwezve gore, iro zvinomiririra kutengesa, zvinotiratidza kuti kutengesa kwe iPhone kunoramba kuchidonha sei, kunetsekana nekuti idzi data dzinoreva United States, nyika uko Apple ine chikamu chikuru chemusika.
Zvinoenderana neiyi data, iko kushandiswa kweApple zvishandiso kubva muna Zvita 19 kusvika 25, inguva yakakoshesa yeKisimusi muUS, yadzika kubva pa49,1% kusvika pa44% gore rinokana chii inomiririra kudonha kwe5% zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura. Kune chikamu chayo, Samsung yakawana 21%, poindi imwe chete kupfuura panguva imwecheteyo gore rapfuura. Vamwe vese vagadziri vanogovana chikamu chakasara pakati pedu patinowana Huawei, LG, Oppo, Amazon, Xiaomi neMotorola, ine huwandu huri pakati pe3 ne2%.
Flurry inotiratidzawo ruzivo nezve zvinoshandiswa nevashandisi, izvo ndichiri kusarudza phablets. Iyo muzana yemapeti akatengeswa ino Kisimusi yakawedzera ne10%, kubva pa27% gore rapfuura kusvika 37% gore rino. Makore matatu chete apfuura, zvinoshandiswa nevashandisi zvemidziyo ine saizi yakakura kupfuura 5,5 inches inongori chete 3% yekutengesa. Zviripachena kuti kuvhurwa kwemhando nyowani dze iPhone ine skrini hombe kwakurudzira kugamuchirwa kwerudzi urwu rwe nharembozha ine hukuru hwakawanda kwazvo hwechidzitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Apple inotora 44% yekushandisirwa kwemidziyo mitsva muUnited States
Mitambo uye maapplication ari kutengeswa kwenguva yakatarwa (Zvita 28)
Apple inobvisa bhangi yekuchinjisa yekubhadhara sarudzo kubva kuApple Chitoro kuGerman